Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Muddo intee le'eg ayay Lacag -bixinta dambe Saameysaa Dhibcahaada Deynta?
Dhammaan nidaamyada dhibcaha ee Mareykanka waxay ku saleysan yihiin taariikhdaada deynta, oo lagu faahfaahiyay warbixinnada rasmiga ah ee Experian, Equifax, iyo TransUnion.
Lacagaha la seegay ama soo daahay ayaa ah dhacdooyinka ugu dhaawaca badan.
Waxay qeexayaan in ka badan saddex meelood meel xisaabinta (35% FICO iyo 40% VantageScore).
Saameyntu waxay ku xiran tahay sida ugu dhakhsaha badan ee aad u saxdo khaladaadka. Waa kuwan aasaaska.
Bixinta daahitaanku waxay noqotaa dambiile 30 maalmood gudahood. Tani waa marka ay tahay in si rasmi ah loo soo sheego. Alaabta noocan ahi waxay ku jiraan diiwaanka 7 sano, ilaa ay si dabiici ah u baaba'aan. Xafiisyadu ma ka saaraan macluumaadka la xaqiijin karo, mana jiraan wax ka baxsan. Haddii deelqaafku yahay khaladkaaga, wajaho muusigga: ma jirto wax aad samayn karto si aad u tirtirto. Haddii dhibaatooyinkaaga maaliyadeed ay keenaan Musuqmaasuqa Cutubka 7aad, wuxuu xumayn doonaa diiwaanada iyo dhibcaha muddo 10 sano ah.
Marka Waa La Tirtiri Karaa
Lacag -bixinta dambe ma baaba'aan ilaa dhicitaanka. Macno malahan intaad soo daahday - 30 maalmood ama 60 maalmood. Si kastaba xaalku ha ahaadee, xogtu waxay sii wadi doontaa inay saamayn ku yeelato xaaladdaada 7 sano. Si kastaba ha ahaatee, macaamiisha ayaa laga yaabaa ka saar lacag bixinta dambe ee warbixinta amaahda haddii ay been yihiin. Warbixinta khaladaadka waa wax caadi ah, waana sababta warshadaha dayactirku u kobcayaan. Mid kasta oo ka mid ah hay'adaha qaranka ayaa samayn kara khaladaadkaas.
Shirkad sida Sharciga Lexington waxay ogaan karaan khaladaadka, ururin karaan caddeymo si ay u caddeeyaan, waxayna furi karaan khilaafyo rasmi ah. Shirkadaha dayactirka ayaa wax walba ku sameeya magacaaga, intaad isha ku heyso horumarka iyadoo loo marayo xariiryo ama barnaamijyo. Isla mar ahaantaana, waxaad xaq u leedahay inaad bilowdo khilaafaadka adiga oo bilaash ah.
Kani waa hawl culus oo waqti badan qaadata, taas oo waliba u baahan aqoon sharciyada amaahda macmiilka. Layaab ma leh, malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa doorta in dhibcahooda loo hagaajiyo. Sida laga soo xigtay Guddiga Ganacsiga Federaalka, 20% macaamiisha la kulmaan dhibco aan caddaalad ahayn.
Inaad la soo daahdo lacag bixin hal mar ayaa ka cawaaqib badan sida aad filayso. Nasiib wanaag, saameyntu way sii baaba'aysaa waqti ka dib, gaar ahaan haddii ay jirto hal khalad oo ku jira diiwaankaaga. Haddii dib -u -dhac dhaco, ka -hortagga waxyeellada adigoo ku bixinaya dhammaan lacag -bixinnadii ku xigay waqtigooda. Tani gabi ahaanba waa muhiim.
Ogsoonow in biilka soo daahay aan la soo sheegin ilaa ay ka soo wareegto 30 maalmood. Tani waxay siinaysaa daaqad si aad u daaweyso. Haddii aad si degdeg ah u bixisid lacag -bixinta, laguma dari doono maaliyaddaadii hore. 30 -ka maalmood ee ugu horreeya ka dib, khaladka waxaa loo dammaanad qaaday inuu saamayn ku yeesho diiwaanada iyo dhibcaha. Cawaaqib -xumadu waxay noqon kartaa mid culus sida luminta 180 dhibcood! Halkan waxaa ah xoogaa yar oo kale.
● Dib -u -dhac Kayar 30 Maalmood
Tani waa xaaladda ugu wanaagsan. Dib -u -dhaca noocan oo kale ah lama soo sheego. In kasta oo aad weli u baahan doonto inaad bixiso ciqaab, dhaawaca waa la yareeyaa.
● Dib u dhac 30-59 Maalmood
30 -ka maalmood ee ugu horreeya ka dib, sumcadda ayaa ka muuqan doonta diiwaannadaada. Isla mar ahaantaana, weli waa inaad, bixisaa lacagta. Sida ugu dhaqsaha badan u samee.
Dib u dhac 60+ maalmood ah
Haddii aad seegto laba taariiqood oo isku xiga, warbixintaada waxaa ku jiri doona ogeysiis gaar ah. Tani waxay sii xumaynaysaa waxyeellada xaaladdaada, markaa si qoto dheer ayay u sii degtaa. Lacag -bixinnada badan ee aad ka booddo - ogeysiisyo badan ayaa lagu daraa, iyo sida ay uga sii daran tahay dhibaatooyinka. Ugu dambayntii, deynta ayaa loo gudbin doonaa kuwa wax aruuriya, halka deyn -bixiyihii asalka ahaa uu xiri doono koontada.
Sidaad arki karto, lacag -la’aantu waa khaladka ugu xun ee aad samayn karto. Bixiyeyaasha kaarka qaarkood kuguma ciqaabayaan lacag -bixinta dambe (kuguma soo rogaan khidmad), laakiin tani ma qiil ka dhigayso taxaddar la'aan. Anshax -xumada ayaa dhibcahaaga halis gelinaysa.
Tilmaamahan kaliya ma saameynayo amaahda mustaqbalka. Waxa kale oo hubiya caymis -bixiyeyaasha, shaqaaleeyayaasha, iyo hantiilayaasha. 30 -ka maalmood ee hore ee dib -u -dhaca ka dib, bixiyaha kaarka ayaa weli soo sheegi doona xadgudubkaaga. Talooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad iska ilaaliso inaad iska dhaafto lacag -bixinta.
1. Ikhtiyaarrada Bixinta Bixinta
Lacagaha otomaatiga ah ayaa ah siyaabaha ugu fudud ee looga hortagi karo khaladaadkaas. Hanaanka dejinta ayaa qaadata 1 daqiiqo, waxayna dammaanad qaadeysaa nabada maskaxda. U habbee lacagahaaga sida waafaqsan shuruudaha, hana u oggolaado nidaamku inuu maamulo inta kale. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hubiso in dheelitirku ku filan yahay bixinta lacag -bixinta.
2. Xusuusiyeyaasha Lacag -bixinta
Qof walba kuma qanacsana qarashka otomaatiga ah. Taa bedelkeeda, waxaad abuuri kartaa xusuusinta jadwalka taariikhda ama sameynta digniinta. Tan waxaa ku jiri kara qoraallo iyo emayl. Nidaamyada ayaa laga yaabaa inay ku ogeysiiyaan marka qoraalkaaga la helo, marka tiro cayiman oo maalmo ah ay ka harsan tahay waqtiga kama dambaysta ah, marka boostada lacag bixinta, iwm. Tani waxay ku xiran tahay ururka amaahda.
3. Dooro Taariikh Cusub oo Cusub
Way adag tahay in lala socdo lacago badan haddii la faafiyo bisha dhexdeeda. Si aad u maamusho lacag -bixinta si ka fiican, waxaad hagaajin kartaa taariikhda la filayo. Tusaale ahaan, haddii biilashaadu ay ku habboon yihiin isla maalinta mushaharka kadib, way fududahay in la fuliyo waajibaadka lagana ilaaliyo kharashaadka.
Lacag -bixinta dambe waa kuwa ugu waxyeellada badan warbixinnadaada wax kasta oo xafiiska ah. Waxay saamayn ku yeelanayaan dhibcaha muddo 7 sano ah, mana jirto si loo tirtiro macluumaadka la xaqiijin karo. Macaamiishu waa inay ka taxaddaraan lacag -bixintooda, maadaama xitaa hal khalad uu leexin doono dhibcaha.
Samee xusuusinta ama otomaatiga si aad uga fogaato tallaabooyinka khaldan. Haddii dhibcahaagu yahay mid aan caddaalad ahayn, tirtir khaladaadka warbixinta iyada oo loo marayo dayactir. Waxaad furi kartaa khilaafaadka adiga keligaa ama waxaad codsan kartaa caawimaad hay'ad lagu kalsoon yahay.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 28